ခေါငျးတဈခွမျး ကိုကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှေ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ခေါငျးတဈခွမျး ကိုကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှေ
1. အူတှေ ကောငျးကောငျး အလုပျမလုပျတော့ဘူး။
ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာနဲ့ Irritable bowel syndrome လို့ချေါတဲ့ အူရောဂါက တှဲနတေတျပါတယျ။ အာရုံကွောစနဈမှာ တူညီတဲ့ပွောငျးလဲမှုတှကွေောငျ့ ခေါငျးကိုကျတာကို ပိုဆိုးစနေိုငျသလို အစာခွတောနဲ့ ပတျသကျပွီးလညျး ပွဿနာတှေ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
နာတာရှညျ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျဝဒေနာ ခံစားရတဲ့သူအမြားစုမှာ ခါးနာတာကိုလညျး မကွာခဏ ခံစားရတတျပါတယျ။ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာက အာရုံကွောနဲ့ ဦးနှောကျကို သှားပွီးတော့ ထိခိုကျစတေဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
ဦးနှောကျကို သှေးစီးဆငျးမှု ရပျသှားတဲ့အခါမှာ လဖွေတျပါတယျ။ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာက လဖွေတျနိုငျခကြေို နှဈဆ မွငျ့တကျစနေိုငျပါတယျ။ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာနဲ့အတူ အလငျးတှမွေငျတာ၊ ခေါငျးမကိုကျခငျမှာ အစငျးကွောငျးတှေ မွငျတာလိုမြိုးတှဲပွီးဖွဈရငျ လဖွေတျနိုငျခြေ အမွငျ့ဆုံးပါပဲ။
4. အမွငျအာရုံတှေ ပွောငျးလဲသှားမယျ။
တခြို့ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာတှကွေောငျ့ ခဏတာ အမွငျအာရုံဆုံးရှုံးသှားတာ (သို့) ပွောငျးသှားတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဖွဈတော့နညျးပမေယျ့ တခြို့ကတြော့ မကျြခှံတှေ တှဲကပြွီးတော့ သူငယျအိမျတှေ ကွီးလာစပေါတယျ။ ခေါငျးကိုကျပြောကျပွီး ရကျသတ်တပတျလောကျအထိ ရှိနနေိုငျတဲ့ နှဈထပျမွငျတာတှပေါ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
5. အိပျစကျမှုကိုလညျး ထိခိုကျလာစနေိုငျပါတယျ။
ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာကွောငျ့ အိပျပြျောဖို့ခကျ၊ အိပျရေးပကျြပွနျတော့ ခေါငျးကိုကျတာက ပိုဆိုးနဲ့ သံသရာ လညျနစေပေါတယျ။
6. အကွားအာရုံတောငျ ဆုံးရှုံးနိုငျပါတယျ။
ဒါက ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲဆိုပမေယျ့လညျး ကွောကျစရာကွီးပါ။ ၇၂ နာရီကြျောအတှငျးမှာ အကွားအာရုံ လငျြမွနျစှာ ဆုံးရှုံးသှားနိုငျပါတယျ။ နာတာရှညျ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျရောဂါရှိသူတှမှော ဒါက ၂ ဆ ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ဖွဈရလဲဆိုတာကို သခြောမသိပမေယျ့လညျး နားထဲမှာရှိတဲ့ သှေးကွောသေးသေးလေးတှေ ပကျြစီးသှားလို့လို့ ထငျကွပါတယျ။
အတကျရောဂါရှိတဲ့သူတှမှော ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာကွောငျ့ တကျတာကို ပိုဆိုးစပေါတယျ။ ပွီးတော့ အတကျရောဂါရော ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာရော ရှိကွတဲ့သူတှမှော အတကျကဆြေးတှကေို တုံ့ပွနျမှုမရှိတာ မြားပါတယျ။
8. တခွားနာတာရှညျ နာကငျြကိုကျခဲမှုတှလေညျး ဖွဈနိုငျခြေ မြားစပေါတယျ။
အမွဲခေါငျးကိုကျနတေဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့နာကငျြမှုကို တုံ့ပွနျတာတှကေို ပိုဆိုးစပွေီးတော့ ကိုကျခဲတာတှကေို ပိုပွီးခံစားရစပေါတယျ။
9. သှေးပေါငျခြိနျကို တကျစတေယျ။
ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ သှေးတိုးနိုငျခြေ ပိုမြားပါတယျ။ ပွီးတော့ လလေ့ာမှုအခြို့အရ အရှယျရောကျပွီးသူတှမှော နာတာရှညျခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာနဲ့ သှေးတိုးတာ ဆကျစပျနကွေောငျးတှရှေိ့ရပါတယျ။
10. စိတျခံစားခကျြတှကေိုပါ ထိခိုကျလာစနေိုငျပါတယျ။
စိတျကတြာ၊ စိုးရိမျပူပနျတာ၊ စိတျကလြိုကျ၊ တကျလိုကျ ဖွဈတာတှအေားလုံးက ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျရောဂါ ရှိတဲ့သူတှမှော ပိုခံစားရတတျပါတယျ။ တဈစိတျတဈပိုငျးအနနေဲ့ ဘယျအခြိနျမှာ ခေါငျးထကိုကျမလဲဆိုတာကို စိုးရိမျပူပနျနရေပါတယျ။
1. အူတွေ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာနဲ့ Irritable bowel syndrome လို့ခေါ်တဲ့ အူရောဂါက တွဲနေတတ်ပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ်မှာ တူညီတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ပိုဆိုးစေနိုင်သလို အစာခြေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နာတာရှည် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့သူအများစုမှာ ခါးနာတာကိုလည်း မကြာခဏ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာက အာရုံကြောနဲ့ ဦးနှောက်ကို သွားပြီးတော့ ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ကို သွေးစီးဆင်းမှု ရပ်သွားတဲ့အခါမှာ လေဖြတ်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာက လေဖြတ်နိုင်ချေကို နှစ်ဆ မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာနဲ့အတူ အလင်းတွေမြင်တာ၊ ခေါင်းမကိုက်ခင်မှာ အစင်းကြောင်းတွေ မြင်တာလိုမျိုးတွဲပြီးဖြစ်ရင် လေဖြတ်နိုင်ချေ အမြင့်ဆုံးပါပဲ။
4. အမြင်အာရုံတွေ ပြောင်းလဲသွားမယ်။
တချို့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာတွေကြောင့် ခဏတာ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသွားတာ (သို့) ပြောင်းသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်တော့နည်းပေမယ့် တချို့ကျတော့ မျက်ခွံတွေ တွဲကျပြီးတော့ သူငယ်အိမ်တွေ ကြီးလာစေပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ပျောက်ပြီး ရက်သတ္တပတ်လောက်အထိ ရှိနေနိုင်တဲ့ နှစ်ထပ်မြင်တာတွေပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
5. အိပ်စက်မှုကိုလည်း ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာကြောင့် အိပ်ပျော်ဖို့ခက်၊ အိပ်ရေးပျက်ပြန်တော့ ခေါင်းကိုက်တာက ပိုဆိုးနဲ့ သံသရာ လည်နေစေပါတယ်။
6. အကြားအာရုံတောင် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါက ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဆိုပေမယ့်လည်း ကြောက်စရာကြီးပါ။ ၇၂ နာရီကျော်အတွင်းမှာ အကြားအာရုံ လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ဒါက ၂ ဆ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကို သေချာမသိပေမယ့်လည်း နားထဲမှာရှိတဲ့ သွေးကြောသေးသေးလေးတွေ ပျက်စီးသွားလို့လို့ ထင်ကြပါတယ်။
အတက်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာကြောင့် တက်တာကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အတက်ရောဂါရော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာရော ရှိကြတဲ့သူတွေမှာ အတက်ကျဆေးတွေကို တုံ့ပြန်မှုမရှိတာ များပါတယ်။
8. တခြားနာတာရှည် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ချေ များစေပါတယ်။
အမြဲခေါင်းကိုက်နေတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်မှုကို တုံ့ပြန်တာတွေကို ပိုဆိုးစေပြီးတော့ ကိုက်ခဲတာတွေကို ပိုပြီးခံစားရစေပါတယ်။
9. သွေးပေါင်ချိန်ကို တက်စေတယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွေးတိုးနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ ပြီးတော့ လေ့လာမှုအချို့အရ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ နာတာရှည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာနဲ့ သွေးတိုးတာ ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
10. စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တာ၊ စိတ်ကျလိုက်၊ တက်လိုက် ဖြစ်တာတွေအားလုံးက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ရှိတဲ့သူတွေမှာ ပိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ခေါင်းထကိုက်မလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်။